तीज पर्ववाट हुँदैन महिलामुक्ति | BIVAS
← सारङ्गीको भरमा धानिएको एउटा जीवन
गोरखा प्रवासी संघ कतार तथा मनकामना सांस्कृतिक परिबारद्धारा हवाई टिकट प्रदान →
तीज पर्ववाट हुँदैन महिलामुक्ति
बाख्रापाठा कराए, घांस काट्ने दिन हराए,
संगिनीले बोल्छन् हेपेर,
मोवाईल किनीदेउ बुढा भैसी बेचेर –
हामीलाई थाहा छ नेपाली महिलाहरुको मुख्य पर्वको रुपमा मानिने तीज पर्वले विस्तारै हाम्रो समाज, घर आंगनमा पाइला टेक्दैछ । रेडियोमा गीत गुञ्जेको सुन्छौं, टेलिभिजनको पर्दामा हामी खुवै सिंगारिएर नाचेको हेर्न सक्छौं। त्यसैकारण तीजको रमझम छाइसकेको महशुश हामी सबैले गरेका छौं।
माथी प्रस्तुत गीतको अंशमा भनौं या हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्ने गीतहरुमा प्रायः गहना, मोवाईल, साडी, चुरा, पोते, गाजल, लाली लगायतका केही श्रृंगारिक सामग्रीको मात्र श्रीमतीले श्रीमानसंग माग गरेको भाव भेटाउंछौं। कस्तो बन्दैछ नेपाली महिलाहरुको पर्व तीज ? के को लागि मनाइंदैछ तीज पर्व ? किन मनाइदैछ तीजपर्व ? तीजपर्व प्रति नेपाली दिदीबहिनीको धारणा कस्तो बनिरहेको छ ? कतातिर मोडिरहेको छ महिला दिदीबहिनीलाई तीज पर्वले ? तीजपर्वले महिला मुक्ति हुन सक्छ ? आदि विषयहरुमा हामी एकछिन गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने आवश्यकता यो एउटा लेखिकाको मात्रै माग होइन, सिंगो देशको माग बनेर खडा भएको छ । तीजपर्व हिन्दु धार्मिक मान्यतामा आधारित छ । धर्मग्रन्थ अनुसार हिमालय र मेनकाले आफ्नी छोरी पार्वतीको विवाह विष्णुसंग गरिदिने बचन दिएका तर पार्वतीले लुकीछिपी महादेवलाई पति स्वीकार गरिसकेकाले महादेव पति पाउं भनि ब्रतबसेकी र उनको इच्छा पूरा भई महादेव पति पाएको उल्लेख गरिएको छ । त्यति बेलादेखि नै विवाह भएका महिलाले पतिको दीर्घायुको कामना र अविवाहित महिलाले महादेव जस्तै पतिपाउं भनि यो पर्व मनाउने चलन छ ।
यो कथालाई सरसर्ती केलाउंदा लाग्छ यी सबै भ्रामक अन्धविश्वासी र रुढीग्रस्त कथा कहानीहरु मात्र हुन् । यसले महिलाहरुलाई परजीवी र शक्तिहीनको रुपमा परिभाषीत गर्दछ । यद्यपी महादेव र पार्वतीको त्यसरी विवाह भएको भएपनि अहिलेको समाजमा त्यस्तो सम्भव छैन । विवाहका लागि तपस्यापनि गर्नु पनि पर्दैन र ब्रत बसेर श्रीमानको आयु पनि बढ्दैन । त्यति मात्रै होईन यस चाडले अन्य विभिन्न ढंगवाट समेत महिलाको इज्जतको खिल्ली उडाएको छ । महादेव र पार्वतीको प्रेम कहानीले नेपाली महिलाहरुको पर्व तीज अब कस्तो बन्दैछ ।
विस्तारै विस्तारै तीजपर्व नयां फेशन पर्वका रुपमा बदलिंदैछ। किनकी हामी हाम्रो समाज हाम्रो शहरमा छर्लङ्ग देख्ने गरेका छौं । कपडा, श्रृङ्गार र गरगहनाका लागि हामी पर्व कुरेर बसेका हुन्छौं । तीज आउनु १/२ महिना अगाडि नै खबरदारी गरेका हुन्छौं । चुरा, पाते लाली, पाउडर किन्न सबै श्रीमानकै रोजाईमा र निर्देशनमा हिड्न बानी परेका छौं । जबकी महिलाहरुको बन्धनको रुपमा मानिने चुरा, पोते, सिन्दुर, लाली, पाउडर, गाजल आदि श्रृङ्गारिक सामग्रीको उपयोगको माध्यमको रुपमा विकसित हुनसक्छ ।
घरमा होस या नहोस, माडबाडीले धोको पुग्यो, अब त झुम्का लगाउंछु
श्रीमानले भन्छन्, झुम्का त सुहाउंदैन साडी चोली लगाउ ।
प्रस्तुत गीतमा तीजमा श्रीमानसंग पैसा मागेर श्रृङ्गारका रुपमा प्रयोग गरिने बन्धनका सामानहरु महंगा गरगहना लगाएर साथी संगिनीलाई देखाउन माइत जानुपर्ने त्यतिमात्र कहां हो र गाडीले पनि भएन पल्सर किनी श्रीमानले श्रीमतीलाई माइत छोड्न जानुपर्ने। यस्तो परनिर्भरता झल्किएको छ गीतमा। यी र यस्ता गीतहरुले समाजको रुपान्तरण र विकास भन्दा पनि समाजलाई पतित, घृणित बनाउने छाडा कोणबाट निकालिएका छन्।
यस्ता गीतहरु जसले नारीलाई यौनप्यास मेटाउने वस्तुको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यस्ता गीतहरुले नारीका अधिकारका कुरा उठाउलान त ? यसले समाजलाई सहि दिशातर्फ मोड्न सक्छ त ? विकृति र विसंगति प्रति समाज यी चीजहरुले झन विकृति फैलाउन उद्धत भइरहेका छन्। अब यी र यस्ता गीतहरुले नारीहरु सहि मुक्तिको दिशातर्फ मोड्न सक्छन त ? कदापी सक्दैनन्। यस्ता गीतहरुले परिवारमा असमानता, समाजलाई विकृति, र विसंगतितर्फ नै डोर्‍याइरहेका हुन्छन्।
जनताले निर्माण गरेको संस्कृतिको रक्षा गर्ने धुनमा त्यसले निम्त्याउने विकृति र विसंगति प्रति पनि सबै सचेत रहनै पर्छ। इज्जत कमाउने, नाममा थरी थरीका महंगा गहनाहरु लगाउंदा लुटपाट र डकैती बढ्ने गरिरहेको छ। केही समय अगाडिको घटना हो म्याग्दी जिल्लाको ताकम गाविस अन्तर्गत पर्ने धारापानीमा गहनाकै कारण आमा र छोरीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुनेका छौं। त्यस्ता घटना धेरै ठांउमा घटेका छन् भने अर्कोतर्फ चाडपर्वमा हुने फेशनको प्रतिष्पर्धाले कैयौ मान्छेहरु आर्थिक अभावले घरबार विहिन हुंदै गएका छन्। अहिलेसम्म आइपुग्दा महिलाहरु पुरुषको दासी र मनोरञ्जनको साधन जस्तोमात्र भएका छन्। तीजपर्व वर्षभरिको जीवनयापनमा परेको समस्यालाई गीतबाट सुनाउने माध्यम त बनेको छ तर महंगा फेशनको प्रयोगले समाजमा आर्थिक र सांस्कृतिक विकृति पनि जरुर निम्त्याएको छ ।
दुःख, पीडा व्यक्त गरेर मात्र समस्याको समाधान हुंदैन, यसले त मान्छेमा निराशा जगाउंछ। तसर्थ हिन्दुधर्म मान्नेहरुले यसका विकृति र विसङ्गतिहरूप्रति पनि सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुले के बुझ्नु पर्दछ भने तीजपर्व महिलालाई अधिकार दिलाउन होइन झनै बढी पुरुषको दास बनाउनका लागि प्रयोग भएको छ। त्यसैले अनेक नौटंकीपुर्वक तीज मनाउनतिर भन्दा बरु अधिकारका लागि अग्रगामी राजनीतिक चेतना सहित नयां प्रेरणा भर्ने अभियानमा सम्पुर्ण सचेत महिला दिदीबहिनीहरु लाग्नु आवश्यक छ ।
Posted by CHINTAN on अगस्ट 13, 2009 in GUEST, SPECIAL
One response to “तीज पर्ववाट हुँदैन महिलामुक्ति”
अगस्ट 14, 2009 at 7:33 बेलुका
It’sareality .